भोलि शनिबार भुलेर पनि नगर्नुहोस् यस्ता कार्य, अन्यथा जीवनमा हुनेछ अशुभै-अशुभ! – Gandaki Chhadke
भोलि शनिबार भुलेर पनि नगर्नुहोस् यस्ता कार्य, अन्यथा जीवनमा हुनेछ अशुभै-अशुभ!
शनिबारलाई प्रकृतिमा अध्यारो दिन पनि भनिन्छ । शनिबार शनिदेव र भैरवको दिन पनि भनिन्छ । जीवनमा आइपर्ने सबै दु:ख र समस्याबाट छुटकारा पाउनको लागी शनिबारको दिन ब्रत राख्नु एकदमै राम्रो मानिन्छ । शनिदेव मानव जीवनमा राम्रो नराम्रो दुबै किसिमको कारक हुन् ।
भनिन्छ जसको कुण्डलीमा शनिको कृपा रहेको छ उसले राज योग सम्मको उपभोग गर्न पाउछ । त्यसतै जसको कुण्डलीमा शनि देवको नराम्रो दृष्टि परेको छ । उसलाई जीवनमा विभिन्न समस्य आउन सक्छ । आउनुहोस् आज हामी तपाई हरुलाई यस पोष्ट मार्फत भगवान शनिदेवाको दिन अर्थात् शनिवारको दिन भुलेर पनि गर्न नहुने यस्ता कार्यको बारेमा बताउने छौँ । अन्यथा भगवान शनि क्रोधित हुनेछन्
१. शनिबार रक्सी पिउनु सबैभन्दा घातक मानिन्छ। शनिबारको दिन रक्सीको सेवन गर्नाले तपाईको जीवनमा यसले एक किसिमको नकारात्मक परिणाम निम्त्याउछ ।२ महिलाहरु शनिबारको दिन माइती जानु पनि शनिदेव अशुभ मान्दछन् ।३ शनिबारको दिन कपाल तथा नंग काट्नु पनि अशुभ मानिन्छ ।
४ शनिबार तेल, काठ, कोइला, नुन, फलाम वा फलामका सामानहरु किन्नुहुँदैन । अन्यथा काममा समस्या उत्पन्न हुने, अचनाक कष्ट भोग्नु पर्ने हुनसक्छ।५ शनिबार दुध र दुध जन्य पदार्थको सेवन गर्नु हुँदैन । यस दिन खोर्शानी र आपको अचारको पनि सेवन गर्नु हुँदैन ।
६ यस दिन झुटो बोल्नु पनि नराम्रो मानिन्छ । त्यस्तो त यस्तो कार्य कुनै पनि दिन गर्नु हुँदैन ।७ यस दिन कसैको पनि अपमान हुने काम गर्नु हुँदैन । विशेष गरेर असक्त अपाङ्ग मानिसको अपमान गर्नु हुँदैन ।
मेष राशिका जोडीमा आइरहन्छ समस्या, तुलालाई प्रतिष्ठाको महत्व, कुन राशिको प्रेम कस्तो ?
भोलीको राशिफल : वि.सं.२०७८ साल मंसिर १८ गते । शनिबार । ईश्वी सन् २०२१ डिसेम्बर ०४ तारिख